Helga kaThixo Harmony Apartment
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguHelga
Sinombulelo ngokumema iindwendwe zethu kwi-Apartament yethu entsha yobunewunewu ekwi-cetral ye-Tirana eMyslym Shyri street. Indlu enamagumbi amabini okulala alala maxesha anemigangatho eyenziwe ngomthi oqinileyo, iplani yomgangatho omtsha oyilwe ngokufanelekileyo ifanitshala eyakhiweyo ejolise ukunika iindwendwe zethu indawo ekhethekileyo. indawo ekhululekile kunye ne-aesthetically ekholisayo. Isikhundla sayo esisembindini, ukucoceka, intuthuzelo kunye nezinto eziluncedo zale mihla ziyenza ibe yindawo ephezulu eTirana.
I-Helga`s Harmony yindlu enkulu, entle, enemibalabala. Le ndlu inokungena iindwendwe ezi-1 ukuya kwezi-4. Yonke ingaphakathi yepropathi intsha ngokupheleleyo. Inebhedi enkulu, kunye nebhedi enye yesofa enokuguqulwa ibe yibhedi epheleleyo. I-Apartment ifakwe ngokupheleleyo kwaye ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo, kunye negumbi lokuhlambela labucala elineshawa enkulu, iibhafu ezikumgangatho ophezulu kunye neetawuli. Indlu kwakhona inomatshini wokuhlamba ocutshungulweyo kunye nenkqubo yokomisa iimpahla.